I-Semalt Expert iyalumkisa nge-Spammers enkulu kunazo zonke kwihlabathi. Khuseleka!
Ukuba ufumana inamba enkulu ye-imeyile kunye neziqhagamshelwano kwiintengiso ze-intanethi okanye abantu becela imali, banamathuba ukuba u-spammer uqikelele i-ID yakho kwaye uqale ukuthumela imilayezo yamanga. Ngesiqingatha sokuqala sika-2011, ubuninzi begaxekile kwibhokisi yethu ebhokisini esetyenziswe ukuvela e-Indiya. Ngo-2016, amazwe aphezulu okuthumela i-spam ayengama-India (20%), i-Indonesia (13%), i-Russia (10%) kunye ne-South Korea (12%).
uNik Chaykovskiy, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo we-10 (Semalt , ukhangeleka apha kwiinyani ezichanekileyo malunga ne-spam yehlabathi.
IRashiya idume ngokubanzi kubadlali bayo be-cybercriminals kunye neengqungquthela ezifana neFacebook - mikrotik wifi setup. Ngokutsho kwe-Trend Micro, eyinkampani eyaziwayo ye-cybersecurity eCalifornia, iRashiya ngoku iphambili xa ifika kwiinkqubo ze-intanethi kunye ne-spam. Ingxelo ye-Trend Micro ibonisa ukuba iziganeko ezibonakalayo ezinjenge-Whitney Houston zokufa ngokukhawuleza, ukuphazamiseka kwezentlalo emhlabeni wonke, kunye noLinsanity banikezele nge-cybercriminals ngezinto ezintsha zobunjineli kunye neengcamango zengqungquthela. Kwabanceda bahlasele kwaye bangene kwinani elikhulu le-ID ye-imeyile kunye neenethwekhi zokufikelela kwiinkcukacha zabucala.
Ukufikelela kuma-asiyibhozo ekhulwini kwi-spam ekujoliswe kuyo kwi-intanethi yenziwa liqela labantu abangaphezu kwe-100, bonke babo bangabakwiqela logaxekile. Igama lale ngqungquthela nguSpamhaus. I-Register yayo yoLwazi lweSpam Operations (ROKSO) lwedatha lubangele iingxaki ezininzi kubasebenzisi be-intanethi..Iminyaka embalwa edlulileyo, i-spammer yase-Ukraine ithumele izigidigidi ze-malware kunye neentsholongwane ezisebenzisa ubuchwepheshe be botnet. Umninimzi wewebhsayithi ye-spammer kwakukho nkampani yase-China eyabanjelwa kwi-web, i-Trend Micro ibike. UMichael Boehm kunye nama-Associates yintlangano yaseMelika, equkethe inani elikhulu logaxekile. Bathumela ugaxekile ogaxekile kunye neentsholongwane kwi-intanethi, ukudala iingxaki kubasebenzisi abahlukahlukeneyo. Iinjongo zazo eziphambili ziluhlu lweenkcukacha, kwaye zasebenza phantsi kwegama lebhizinisi kunye namagama abo.
I-Yair Shalev yayiyi-spammer ephakamileyo ye-snowshoe eFlorida. Wabambisana ne-ROKSO spammer, uDarrin Wohl, ukuphuhlisa ubuchwephesha ukutshabalalisa inani elikhulu leekhomputha kunye nezixhobo zeselula emhlabeni wonke. UDante Jimenez wayengumdlali wogaxekile wase-United States osebenza kunye neengcali ze-cybercriminals and botnet emhlabeni wonke. Wayebandakanyeka kwiiprojekthi ezahlukahlukeneyo ze-botnet kwaye wayephambili ekukhungeni amaseva kunye neendaba ezivelele zeendaba. UPeter Severa wayengumdlali ochwephezayo waseRashiya owabhala kwaye wathengisa iinkqubo ezahlukeneyo zegciwane-spamming, spamware, kunye neebhotile ezigidi kwizigidi zeedola. Kwakhona wabandakanyeka ekubhaliseni nasekukhululeni i-trojans ezimbi nakwii-virus. Usebenze kunye neentlobo zeentlobo ze-botnet zaseYurophu kunye ne-American kwaye wabambisana nomnxeba wase-US u-Alan Ralsky.
UMichael Persaud wabanjwa yi-FBI kwiinyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Wayebandakanyeka kumatyala amaninzi kwaye wahlawuliswa ngemisebenzi eyahlukeneyo yogaxekile. I-Yambo Ezezimali ngumnye u-spammer waseUkraine owayebandakanyeka kwii-cybercrime ezahlukeneyo. Wayevelisa ezininzi iinkqubo ezigwenxa kwaye zathengisa izigidi zeedola. Kwakhona wamisa i-akhawunti yebhanki yebhanki kwi-intanethi kwaye wayiba imali eninzi kwiakhawunti ebhanki efanelekileyo. Kuze kube ngoku, lo mthi-spammer utyholwa ngamacandelo e-cybercrime ahlukeneyo, kwaye i-FBI iyimlandela. Ngokukhawuleza okanye kamva, uya kubanjwa, ingxelo ye-Trend Micro.